List Khabar – Page 40 – New List Khabar – Daily News Updates
एड्स रोगीमा संक्रमणको असरबारे भारतको राम मनोहर लोहिया अस्पतालमा गरिएको अध्ययनको नतिजा आश्चर्यजनक आएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार संक्रमण भए पनि यसका कारण एड्स रोगी मृत्यु हुने दर एकदमै कम ०.०२५ प्रतिशत देखिएको हो। दिल्लीमा संक्रमितको कूल मृत्यु दर भने १.७५ प्रतिशत छ। यस विषयमा चिकित्सकसमेत चकित परेका छन्। भाइरसको …
घरमा देखिने माउसुलीले दिन्छ यस्तो संकेत, मिल्दछ यस्तो फल !
काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घटनाका बारेमा अवगत गराइदिन्छन्। घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घटना बताइदिन्छन्। यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ। जानौं माउसुलीसँग जोडिएका शुभ तथा अशुभ कुरा : नयाँ घरमा प्रवेश गर्ने समयमा गृहस्वामीले मरेको वा माटो लागेको माउसुली देखेमा उक्त घरमा …
कपालमा चायाँले हैरान बनायो ? राहत पाउन अपनाउनुहोस् यी ५ सजिला घरेलु तरिका !
काठमाडौँ । कपालमा चाया पर्नु आममानिसको एउटै समस्याजस्तै भएको छ।उक्त समस्याबाट बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै प्रभावित हुनेगर्छन्। महिलाको कपाल लामो हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा महिला बढी प्रभावित हुनेगर्छन्।तर समस्या र समाधानको उपाय भने एउटै हुन्छ। जाडोभन्दा वर्षात्को समयमा चायाले बढी दुस्ख दिने गर्छ। वर्षात्मा फोहोर पानीले कपाल भिझ्ने हुँदा छालामा व्यक्टेरिया …
तनहुँमा यही भदौ ३१ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९ को जोखिम अझै कम नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा अवधि बढाएको हो । कोभिड–१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को …
काे हुन् कन्निका ? जसले पारस शाहकाे ‘एटीएम’ नै लगेर कराेडाैं लुटिन्
बेला-बेलामा विवादित बनेर चर्चामा आइरहने पात्र हुन्, पूर्व युवराज पारस शाह। पारसको नाम सुन्नबित्तिकै उनकी पत्नी हिमानी शाहको चित्र पनि झ,’ल्किहाल्छ। त्यसो त हिमानीलाई नेपालकै आकर्षक महिलाको रुपमा पनि चिनिन्छ। ‘नेपाल’ म्यागाजिनले त केही वर्षअघि हिमानीको तस्वीरलाई कभर फोटो बनाएर देशकै सबैभन्दा सुन्दर र आकर्षक महिलाको रुपमा घो,’षणा गर्यो। सर्वसाधारणकोे …
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन्। कुनै-कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ। भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ। जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु …
धन प्राप्तिको लागि राशि अनुसार गर्नुहोस् यस्ता सरल उपाय, मालामाल हुनुहुनेछ !
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रमा धन प्राप्तिको लागि अनेक उपायहरु बताइएको छ। यी उपायहरू धेरै सरल र प्रभावकारी छन्। यदि कुनै व्यक्तिले यी उपायहरू विधिवत तरिकाले गर्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सबै प्रकारका आर्थिक समस्याहरू समाधान हुनेछ। तपाईं पनि आफ्नो राशि अनुसार धन प्राप्तिका यी उपाय गर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशि बिहान सूर्य …
हुन भाइरल नेपाली बेहुली जसले लकडाउनमा विबाह गरेर आफ्ना पतिलाई बुलेट बाइकको पछाडी राखेर घर लगिन्, यि सु री बेहुलीलाई देखेर सबै छक्क परे, बेहुलालाई बुलेटमा चढाएर घर पुर्याएपछि भनिन् यो त ट्रेलर मात्रै हो ह नि मुन मा देखिन्छ पूरा फिल्म त, भिडियो भाइरल यि अनौठा नेपाली जसले प्रेम …
शरीरको यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिको विवाहपछि चम्किन्छ भाग्य, तपाईको पनि छ की ?
काठमाडौं । समुद्रशास्त्रमा शरीरको अलग-अलग अंगहरुमा भएको कोठीको बारेमा केही रहस्यहरु बताईएको छ। केही कोठीले व्यक्तिको जीवनमा आउने समस्याहरुको बारेमा बताउने गर्दछ भने केहीले उनीहरुको भाग्य र धन लाभको सूचना दिने गर्दछ। यहाँ शरीरको अंगहरुमा भएको यस्तो कोठीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जसलाई विवाहपछि धन र उन्नति दिलाउने संकेत मानिएको छ। …
नम्रता सुवेदी नाम गरेकी युवतीले आफ्नै काका ससुरा दिनेश सुवेदीसंग अ नैतिक सम्बन्ध राखेको उनी आफैले बोध गराउदै आएकी छिन् ।फ रार भएका उनीहरुलाइ प्रहरीमा पेस गराएपछि कागज गरेर छिटाइएको पाइएको छ ।नम्रताले आफ्नो श्रीमान अनिल सुवेदीको केही सम्पत्ति,सन्तान केही नचाहिने र सबै त्यागेर आफू एक्लै बस्ने कागज गरेर उनी …
Page 40 of 294« First...102030«3839404142 » 506070...Last »